ကျွန်ုပ်တို့သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သို့မဝင်ရောက်မီ nootropic ဖြည့်စွက်၊ မင်းရဲ့သော့နောက်ခံအကြောင်းနားလည်ဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သောသိသာသောအာဟာရဓာတ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်သည်ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အာရုံခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သွေးသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
သင်ကမဂ္ဂနီစီယမ်ကို per se ယူနိုင်သည်။ သို့သော်ဤဖြည့်စွက်ချက်အများစုသည် chelated သို့မဟုတ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Chelation သည်သတ္တုဓာတ်များ၏စုပ်ယူမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဇီဝရနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများထက် ဦး နှောက်ထဲတွင်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျပြုပြင်ခြင်းအတွက်သိသာသောအချက်များဖြစ်သောပလတ်စတစ်နှင့် synaptic သိပ်သည်းဆကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့သည် စိတ်ကြွရောဂါအခြားအခြေအနေများတွင်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ စူးရှသော ဦး နှောက်ဒဏ်ရာ၊
အာရုံကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုကုထုံးဖြင့်ကုသခြင်းသည်ရန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဤဓာတ်သတ္တုသည်သွေးနှင့် ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုအလွယ်တကူမဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြေခံကျသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့် ဒီပဟေtoိရဲ့နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာတယ်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဆိုတာဘာလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်သည်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် L-Threonate မော်လီကျူးများပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းဥစ္စာတစ် ဦး အဖြစ်နှစ်ဆ nootropic နှင့် neuroprotective မူးယစ်ဆေးဝါး။
၎င်း၏တည်ရှိမှုသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာ Guosong Liu နှင့်မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ချင်းတို့ကကြွက်များတွင်ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်ထိရောက်သောဖြည့်စွက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမတိုင်မီသုတေသီတွေကသွေးကြော - ဦး နှောက်အတားအဆီးမှာဓာတ်သတ္တုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ဦး နှောက်ထဲသို့မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားမဂ္ဂနီစီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများထက်ပိုမိုဇီဝရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သွေး - ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုအလွယ်တကူဖြတ်ကျော်သွားသောကြောင့်၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှု၏နောက်ဆုံးအစားထိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကို ၁၅% တိုးစေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အကျိုးကျေးဇူးများ neuroplasticity တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ဦး နှောက်မှဆင်းသက်လာသည့် neurotrophic အချက်များတိုးပွားလာစေရန်လည်းလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်အာရုံခံဆဲလ်များဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်အရေးပါသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည် ဦး နှောက်ရောဂါများကိုစီမံရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ ဦး နှောက်ဆဲလ်များတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ပါဝင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Psychonauts သည်၎င်း၏မတည်ငြိမ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုဝယ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်စဉ်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤဖြည့်စွက်ချက်သည်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ADHD၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်ဆေးညွှန်းထိုးဆေးဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည် nootropics ဖြည့်စွက်ချက်အဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်
Threonate ဒြပ်စင်ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သွေးကြောနံရံအတားအဆီးကိုအလွယ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ ဤသည်မော်လီကျူးသည် Synaptic သိပ်သည်းဆနှင့်အာရုံခံလွှဲပြောင်းအတွက်တိုးများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအရ၊ ဤဖြည့်စွက်စာကိုယူသောလေ့လာသူများသည်ဖြစ်စဉ်မှတ်ဥာဏ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်လာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ပြောင်းပြန် ဦး နှောက်အို
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ သုတေသီများကအဆိုပါဆေးသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကိုးနှစ်ငယ်စေနိုင်သည်ဟုအတည်ပြုသည်။
အိုမင်းခြင်းက ဦး နှောက်ကိုကျုံ့စေပြီးစိတ်ကျဆင်းစေသည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဤ synapses များဆုံးရှုံးခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် neuroplasticity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ဦး နှောက်၏မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်ကိုအမြင့်ဆုံးအထိထိန်းသိမ်းထားသည်။
Anxiolytic Properties ကို
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Thronate ADHD ဖြည့်စွက်မှုသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကသင့်စိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီးစိတ်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်။ ၎င်းသည် GABA neurotransmitter များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများ၏ activation ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
သွေး - ဦး နှောက်အတားအဆီးမှာ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကို ဦး နှောက်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးပါ
Hypnotic Properties ကို
အကယ်၍ သင်သည်အိပ်မပျော်လျှင်၊ သင်သည်သင်၏အိပ်မပျော်မှုကိုပြုပြင်ရန်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုသင်ဝယ်နိုင်သည်။ ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကြွက်သားများကိုကယ်လ်စီယမ်များထုတ်ယူခြင်းဖြင့်ဖြေလျော့ပေးသည်။ Melatonin နှင့်ခဏအိပ်ရန်စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးသော cortisol နှင့်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
ဤအခြေအနေများသည်မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းကြောင့် neurodegenerative ရောဂါများဘဏ်များကိုကုသရာတွင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ADHD ဆေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းကို ဦး နှောက်တွင် ADHD၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့် Alzheimer တို့နှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
ဒါ့အပြင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဆေးတောင့်ကိုသုံးခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုသို့မဟုတ်အယ်လ်ဇိုင်းမား၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ယူရန်
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သောက်သုံးမှုသည်လိင်၊ အသက်နှင့်ရည်ရွယ်သည့်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်အချက်အချို့အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၃၀ ကြားအရွယ်ရှိသူများအတွက်ပုံမှန်ဆေးပမာဏသည် ၄၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်သာသောက်သုံးနိုင်သည်။ အသက် ၃၁ နှစ်အထက်သူတိုင်းသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ၂၀ မီလီဂရမ်တိုးနိုင်သည်။
သိမှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate nootropic ကိုသောက်သောအခါတစ်နေ့လျှင် 1200mg ထိထိုးနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် Magnesium L-Threonate အိပ်ဆေးဖြည့်သည့်အခါ၎င်းပမာဏသည် ၄၀၀ မီလီဂရမ်အထိကျဆင်းသွားသည်။
တစ် ဦး အဖြစ်ဒီဝင်းယူပြီးအခါ အစားအသောက်ဖြည့်စွက်, သင်သည်တစ်နေ့လျှင် 1000mg နှင့် 2000mg အကြားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဆေးတောင့်ကိုနှစ်ခါခွဲ ခွဲ၍ နံနက်ယံ၌၊ အိပ်ရာမဝင်ခင်လေးတွင်စီမံသင့်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
ပုံမှန်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ငိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အိပ်စက်ခြင်းသည်သင်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဖုံးကွယ်ထားသည့်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ရုန်းကန်နေရလျှင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အိပ်ဆေးသည်သင့်ကိုမျက်လုံးမှိတ်စေနိုင်သည်။
ဤဖြည့်စွက်ဆေးသည်အခြားဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပantibိဇီဝဆေးများ၊ ကြွက်သားလျှော့ပေးသောဆေးများ၊ သွေးပေါင်ချိန်များသို့မဟုတ်သွေးတိုးဆေးများသောက်သည့်အခါသင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်သည်မဂ္ဂနီစီယမ်သည် pharmacodynamics ကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်နှင့်အသုံးပြုမှု
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည် nootropic တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအားပေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည် neurodegenerative အခြေအနေများကိုစီမံရန်အတွက်ဆေးညွှန်းဖြစ်သောဆေးဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးသည်အထီးပုံစံပြောင်မှုများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်။ L-Threonate ဒြပ်ပေါင်းသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသော dihydrotestosterone (DHT) ဟော်မုန်း၏စွမ်းအားကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဒါ့အပြင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခက်အခဲရှိသူတွေကဒီဆေးကိုအိပ်မောကျစေခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများကိုသက်သာစေရုံသာမကခန္ဓာကိုယ်ကိုငြိမ်သက်စေသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါကိုလျှော့ချ။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှတဆင့်အသုံးပြုသူများသည်ဖြည့်စွက်မှုကိုစီမံပြီးသည်နှင့်မကြာမီတွင်ငိုက်မျဉ်းခြင်းခံရမည်ဟုအတည်ပြုကြသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ယူရန်
သင်မဂ္ဂနီဆီယမ် L-Threonate ကိုလမ်းညွှန်ဝယ်ယူမည့်နေရာတွင်သင်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်သည်။ nootropics အများစုပြည်နယ်များအတွက်ဥပဒေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, သင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားရန်အချိန်ပါပဲ ဖြည့်စွက် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များမှ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်လွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်အမြောက်အများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုသက်သာနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်ဘာအတွက်ကောင်းသနည်း။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate တက်ဘလက်များသည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ပံ့သည်။ အခြားမတူဘဲ မဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးအစားများ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်သွေး - ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ အဲဒါက neuroprotective nootropic.
ထို့အပြင် neurodegenerative ရောဂါများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောလူနာများသည်သူတို့၏အခြေအနေများကိုစီမံရန်အတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုယူသင့်ပါသလဲ။
ဒီဖြည့်စွက်စာကိုနံနက်ယံ၌နှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီယူသင့်သည်။ Magnesium L-Threonate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာမူးဝြေခင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ညအချိန်တွင်ယင်းကိုသင်စီမံရန်သင့်တော်သည်။
ငါးမျိုးကျော်ရှိပါတယ် မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ကွဲပြားခြားနားအလုပ်လုပ်သော။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ ဦး စားပေးသည်သင်စီမံလိုသောခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်သိမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသူတို့၏ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပြီးနောက်မည်သူမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သူနှင့်မတူသည့်အချက်မှာမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်စိုးရိမ်ပူပန်သောမူးယစ်ဆေးသည်သွေးနှင့် ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည့်ဇီဝရရှိနိုင်မှုမြင့်မားသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ကောင်းပါသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate တက်ဘလက်များသောက်ခြင်းသည်သင်၏စိတ်အခြေအနေကိုလျော့နည်းစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်း၏အေးဆေးသက်ရောက်မှုကစံပြ anxiolytic မူးယစ်ဆေးဝါးစေ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်သွေးပေါင်ချိန်အတွက်သင့်တော်ပါသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံပိတ်ဆို့ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဒီဆေးဟာသွေးပေါင်ချိန်ကို ၅.၆ / ၂.၈ မီလီမီတာအထိသိသိသာသာလျှော့ချပေးလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှုများအရ၎င်းသည်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်နှလုံးရောဂါများအပါအဝင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်ဟုအတည်ပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သောက်သုံးသောပမာဏသည်သင့်အားသွေးပေါင်ချိန်များစွာရှိသောဆေးများဖြင့်သင်စီမံနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်အလုပ်လုပ်ရန်မည်မျှကြာပါသနည်း။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သက်သာခွင့်များသည်တစ်လအကြာတွင်ထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်အနည်းဆုံးလေးပတ်ကြာမြင့်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။
သင်အိပ်မပျော်မှုကိုကုသနေလျှင်၊ ဖြည့်စွက်ချက်သည်ချက်ချင်းနီးပါးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ပူခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ထိခိုက်ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲခြင်းများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်တစ်ပတ်အတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။
Shen, Y. , et al ။ (2019) ။ မဂ္ဂနီစီယမ် -L-Threonate ကိုကုသမှုသည် Cerebrospinal Fluid တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Mouse Model တွင်မော်တာလိုငွေပြမှုနှင့် Dopamine Neuron ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါနှင့်ကုသရေး။
Slutsky, ဗြဲ, et al ။ (2010) ။ ဦး နှောက်မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။ Volume ကို 65, Issue 2, p143-290 ။
Mickely, AG က, et al ။ (2013) ။ နာတာရှည် Dietary Magnesium-L-Threonate သည်မျိုးသုဉ်းခြင်းကိုမြန်စေပြီးအရသာရှိခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, အတွဲ 6, p16-26 ။
ဝေလီလီ။ (2014) ။ ဦး နှောက်မဂ္ဂနီစီယမ်မြင့်တက်ခြင်းက Synaptic ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး Alzheimer ရောဂါ Mouse မော်ဒယ်လ်တွင်သိပ္ပံနည်းကျချို့ယွင်းချက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ မော်လီကျူး ဦး နှောက်။
Zarate, ကားလို့စ် et al ။ (2013) ။ ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောစိတ်ကျရောဂါအသစ်ပြadနာများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။
Wroolie, TE, et al ။ (2017) ။ Dementia နှင့်အတူလူနာများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏ Open-Label စမ်းသပ်မှု။ အိုမင်းခြင်းအတွက်တီထွင်မှု, အတွဲ 1 ။
RAW မဂ္ဂနီဆီယမ် (2R, 3S) -2,3,4-TRIHYDROXYBUTANOATE POWER (778571-57-6)
2. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
3. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်မည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသနည်း။
4. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Thronate သည်အကျိုးရှိစေသည်
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း
6. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
၇။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်နှင့်အသုံးပြုမှု
8. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ